लकडाउनको अघिल्लो दिन चैत १० मा अफिसबाट बिदा लिएर उनी सुनसरीस्थित घर गएकी थिइन् । ३९ दिनपछि मोटरसाइकलमा काठमाडौं फिरिन् । कार्यालय जानुअघि आफैं कोरोना नभएको प्रमाणित गर्न टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगिन् । स्बाब दिएको भोलिपल्ट वैशाख ३० गते राति १० बजे आफ्नो रिपोर्ट पोजिटिभ भएको थाहा पाइन् ।
म ललितपुरको पुल्चोकस्थित आरोग्य फाउन्डेसनको कर्मचारी हुँ । घर गएको ३९ दिनपछि काठमाडौं फर्किएर अफिसमा फोन गरेँ । १५ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर सुनाए । यसरी बस्नुभन्दा आफंै अस्पताल गएर कोरोना नभएको पुष्टि गरेको रिपोर्ट लिएर आउँछु भन्ने लाग्यो । कोठामा समेत नछिरी सिधै टेकु अस्पताल गए । स्वाब दिएँ । ठिमीमा रहेकी साथीले कोठामा बोलाइरहेकी थिइन् । यहाँ आउनुअघि पनि साथीलाई तपाईंको घरबेटीले के भन्ने हो ? म त बाहिरबाट आएको भनेर सोधेको थिए । केही भन्नुहुन्न भनेपछि गए । २९ गते एक रात र ३० गते दिउँसो साथीकैमा बसे ।
मलाई घरबाटै सरेको हुन सक्छ भन्ने भयो । साढे १० बजे त मलाई लिन एम्बुलेन्स आइपुग्यो । टेकु अस्पताल पुर्‍याए । अस्पतालमा ५ वटा आइसोलेसन कोठा थिए । त्यसमध्येमा मलाई एउटामा राखियो । त्यो रात त तनावले सुत्नै सकिएन । भोलिपल्ट बिहानदेखि आफ्नै बारेमा समाचार आउन थाल्यो । सिन्धुलीको माइतीमा सिल गरियो । नर्सलाई कोरोना लाग्यो रे भन्ने समाचार आउन थाल्यो । न म नर्स थिएँ, न त विवाहित नै । म अस्पताल प्रशासनको कर्मचारी थिएँ । म अविवाहित हुँ । घरबाट काठमाडौं आउँदा मैले खाना खाएको सिन्धुलीको भिमान ठूलीमामुकी छोरीको घर हो । समाचारमा मेरो माइती भनिएको थियो । सबै कुरा गलत हो भनेर कसलाई भन्नु ? म को हँु ? आफन्तलाई थाहा छँदै थियो । अनि घरमा सिल भयो, साथीको कोठा भएको ठाउँमा सिल भयो, मैले खाना खाएको सिन्धुलीमा सिल भयो भन्ने समाचारले झन् तनाव भयो । अनि आफ्नो बारेमा गलत समाचार आउँदा कोरोनाको लक्षण भएजस्तो हुन्थ्यो । घर, साथी, अफिस र सिन्धुलीमा दिदीकोमा सिल गर्‍यो भन्दा मेरो कारणले यस्तो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । बिस्तारै भुल्दै गएँ ।
म उता घरमा थिएँ । यता डाक्टर र अरू साथीहरु दोहोरो ड्युटी गरिरहेका थिए । तर, म नहुँदा उहाँहरुले तलब पाउनुभएको थिएन । एक सातामै फर्किहाल्छु भनेर चैत १० गते जहाजमा विराटनगरसम्म गएको थिएँ । लकडाउन थपिँदै गयो । गाडी बन्द भयो । आउनै सकिएन । मेरो कारणले अरूले तलब नपाएपछि तनाव पनि भयो । जिल्ला प्रशासनबाट पास बनाएर अंकलको मोटरसाइकलमा काठमाडौं आएँ । सिन्धुली भिमानमा ठूलीममीकी छोरी दिदीकहाँ खाना खाएँ । हामी त्यहाँ आधा घण्टा पनि बसेनौँ । यहाँ बस्दा पनि सचेत थियाँै । दूरी कायम गर्‍यौँ । आफूमा कोरोना भएको र कुनै लक्षण देखिएको भए घरबाट आउने नै थिइनँ ।
कोठामा टेलिफोन छ । सीसी क्यामेरा छ । केही समस्या पर्‍यो वा आवश्यक परेको सामान माग्न फोन गर्दा ल्याइदिन्थ्यो । ब्लड प्रेसर दिनमा तीन पटकसम्म नाप्न आउँथे । १० दिनमा एकपटक चिकित्सक राउन्डमा आउनुभयो । आफूलाई केही समस्या पर्‍यो भने सिधै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सोध्न मिल्थ्यो । खाजा र खाना समयमै आउँथ्यो । बिहान ७ बजे दूध, बिस्कुट र अण्डा ल्याइदिन्थ्यो । १० बजे खाना हुन्थ्यो । दिउँसो २ बजे चिया बिस्कुट दिन्थ्यो । बेलुका ६ देखि साढे बजेसम्म खाना हुन्थ्यो । सुरुको दुई दिन बिहान मासु खाना आयो । म साकाहारी भएकाले मासु फिर्ता गरँे । तेस्रो दिनबाट चाहिँ भेज खाना आउन थाल्यो ।
भक्तपुरमा कोठा छ तर, आफू संक्रमित भएको कुरा घरबेटीलाई पनि भनेको छैन । कोठामा जाउ घरबेटीले फिर्ता गर्ला ? आफ्नो रिपोर्ट पोजिटिभ भएको देखाउँदा अस्पताल बसेको थाहा पाएपछि के भन्ला ? त्यसैले अफिसले व्यवस्था गरेकै ठाउँमा बसेको छु । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।